EU Oo ugu baaqay dalalka deriska ah qeyb ka noqoshada wadda-hadallada dhinacyda Soomaalida – Radio Daljir
EU Oo ugu baaqay dalalka deriska ah qeyb ka noqoshada wadda-hadallada dhinacyda Soomaalida
Luulyo 23, 2013 5:54 b 0
Brussels, July 23- 2013 – Ururka midowga Yurub ayaa ku baaqay in xasilinta Soomaaliya gacan weyn laga geysto, gaar ahaan waxaa si khaas ah baaq loogu jeediyey dalalka deriska la ah dalka Soomaaliya, kuwaasi oo aad ula socda waxa ka jira gudaha dalka.
War-bixin ka soo baxday xafiiska arimaha debeda ee ururka midowga Yurub, waxaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in dalalka deriska la ah Soomaaliya in ay qeyb ka noqdaan nabad iyo xasilooni ka dhalata dalka geeska Afrika.
EU waxay ka dalbadeen dalaka Jabuuti, Ethopia iyo Kenya in ay qeyb ka noqdaan sidii xaalada Soomaaliya loogu dhamayn lahaa wadda-hadalo siyaasadeed, kuwaasi oo dhexmara dhinacyda isku haya dalka Soomaaliya.
?Wada-shaqeyn gobol oo dhab ah kaliya door kama cayaareyso in Soomaaliya xal loo helo, balse waxay sidoo kale gacan ka geysanaysaa jawi xasilloon oo weyn iyo barwaaqo uu gobolku gaaro? ayaa lagu yiri war-bixinta ka soo baxday xafiiska arimaha debbeda ee midowga Yurub.
Ugu dambeyntii ururka midowga Yurub waxay sheegeen in ay muhiim tahay mar kasta in xaalada Soomaaliya ay qeyb ka noqoto wadda-hadalo siyaasadeed oo ka dhaca gudaha, waxaana ururku ay sheegeen in ay ka taageeri doonaan dalalka IGAD hirgelinta qorshahaas.